RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii barbaraha ku idlaaday ee dhexmaray kooxaha Atlético Madrid iyo Bayer Leverkusen ee Champions League – Gool FM
Haaruun Yuusuf March 15, 2017
>- Atlético ayaan gool laga dhalin siddeedii kulan ee ugu dambeeyey ee ay garoonkeeda ku ciyaartay Champions League tan iyo guushii 4-1 ee ay ka gaareen AC Milan 11 Maajo 2014, lugtii ugu labaad ee wareeggii 16-ka waxaana goolkaas ka dhaliyey Kaká.
>- Kooxda Atlético Madrid ayaa gaartay quarter-finals ama siddeed dhammaadka Champions League markeedii shanaad.
>- Atlético Madrid ayaa siddeed dhammaadka Champions League gaartay afar xilli ciyaareed oo xiriir ah waana xilli ciyaareedyadii 2013/14, 2014/15, 2015/16 iyo 2016/17.
>- Javier Hernández ayaa saftay kulankiisii 46-aad ee Champions League, waana kan ugu badan ciyaaryahan kasta oo Mexican ah, isagoo ka sare maray Rafael Márquez.
>- Diego Pablo Simeone ayaa noqday tababaraha kaliya ee gaara siddeed dhammaadka Champions League mid kasta oo ka mid ah afartii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
>- Jan Oblak ayaa 6 badbaado ka sameeyey kooxda Bayer Leverkusen mana jiro goolhaye ka badan inta badbaado oo uu sameeyey Oblak, marka la eeg wareegga 16-ka Champions League xilli ciyaareedkan.
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay Monaco kooxda Man City ka ciribtirtay Champions League